May Thun Kha – မေသွန်းခ – Gentleman Magazine
May Thun Kha – မေသွန်းခ
19/10/2015 01/11/2015 Admin
ကိုယ်ရေး အကျဉ်း . . .
အ နု ပ ညာ လော က ထဲ ကို ၂၀၁၄ နှစ် ကုန် ခါ နီး မှာ စ ပြီး ဝင် ခဲ့ တယ်။ ဒီ လမ်း ကို ဘာ လို့ ရွေး ခဲ့ လည် ဆို တော့ ဝါ သ နာ ပါ လို့ ရွေးခဲ့ တာပါ။ ခု လက် တ လော Model Show ပွဲ တွေ လက် ခံ ထား တယ်။ ၂၀၁၆ အ တွက် Calendar တွေ ရိုက် ဖြစ် တယ်။ J-Donuts ကြော် ငြာ လေး ရိုက် ထား တယ်။
အဆင်မပြေတာတွေ ကြုံရတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ့် စိတ် ကို အား တင်း ပြီး ပျော် ပျော် နေ တယ်။ စိတ် တည် ငြိမ် အောင် တ ရား ထိုင် တယ်။ အ လုပ် အား ရင် အိမ် မှာ နေ ပြီး ရုပ် ရှင် ကြည့် တယ်။ အင် တာ နက် က နေ Modeling အ ပိုင်း တွေ ရှာ ပြီး လေ့ လာ ဖြစ် တယ်။ ကျန်းမာရေး နဲ ပက်သက်ပြီး GYM ဆော့ ဖြစ် တယ်။ လေး စား အား ကျ ရ တဲ့ သူ တွေ က ဖေ ဖေ နဲ့ မေ မေ ပါ။ ဖုန်း က တော့ တစ်နေ့ တာမရှိမဖြစ်လိုအပ် တဲ့ အသုံး အဆောင်ပစ္စည်း ပါ။
ယောက်ျားတွေ အပေါ် သူ့အမြင် . . .
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို စတွေ ချိန် ပထမဆုံး သတိထားမိတာ က သူ့ ရဲ့ စ တိုင်လ် ပါ။ ယောကျာ်း တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်း တွေက တာ ဝန် ယူ တတ် ပြီး က တိ တည် တဲ့ အ ရည် အ ချင်း ပါ။ လက်ခံလို့မရတဲ့ အမူအကျင့် က စိတ် ထား သေး သိမ် တာ ပါ။
Fan တွေအတွက် . . .
အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Facebook – May Thun Kha Mtk , Instagram – May Thun Kha တွေမှာ Follow လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ပြောချင်တာက အား ပေး တဲ့ ပ ရိ သတ် တစ် ယောက် ချင်း ကို ကျေး ဇူး တင် ပါ တယ်။ အ ကောင်း ဆုံး ဖြစ် အောင် ကြိုး စားနေပါတယ်။
ကိုယျရေး အကဉျြး . . .
အ နု ပ ညာ လော က ထဲ ကို ၂၀၁၄ နှဈ ကုနျ ခါ နီး မှာ စ ပွီး ဝငျ ခဲ့ တယျ။ ဒီ လမျး ကို ဘာ လို့ ရှေး ခဲ့ လညျ ဆို တော့ ဝါ သ နာ ပါ လို့ ရှေးခဲ့ တာပါ။ ခု လကျ တ လော Model Show ပှဲ တှေ လကျ ခံ ထား တယျ။ ၂၀၁၆ အ တှကျ Calendar တှေ ရိုကျ ဖွဈ တယျ။ J-Donuts ကွျော ငွာ လေး ရိုကျ ထား တယျ။ အဆငျမပွတောတှေ ကွုံရတဲ့ အခြိနျတှမှော ကိုယျ့ စိတျ ကို အား တငျး ပွီး ပြျော ပြျော နေ တယျ။ စိတျ တညျ ငွိမျ အောငျ တ ရား ထိုငျ တယျ။
အ လုပျ အား ရငျ အိမျ မှာ နေ ပွီး ရုပျ ရှငျ ကွညျ့ တယျ။ အငျ တာ နကျ က နေ Modeling အ ပိုငျး တှေ ရှာ ပွီး လေ့ လာ ဖွဈ တယျ။
ကနျြးမာရေး နဲ ပကျသကျပွီး GYM ဆော့ ဖွဈ တယျ။ လေး စား အား ကြ ရ တဲ့ သူ တှေ က ဖေ ဖေ နဲ့ မေ မေ ပါ။ ဖုနျး က တော့ တဈနေ့ တာမရှိမဖွဈလိုအပျ တဲ့ အသုံး အဆောငျပစ်စညျး ပါ။
ယောကျြားတှေ အပျေါ သူ့အမွငျ . . .
ယောကျြားတဈယောကျကို စတှေ ခြိနျ ပထမဆုံး သတိထားမိတာ က သူ့ ရဲ့ စ တိုငျလျ ပါ။ ယောကျြား တဈယောကျမှာ ရှိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြး တှကေ တာ ဝနျ ယူ တတျ ပွီး က တိ တညျ တဲ့ အ ရညျ အ ခငျြး ပါ။ လကျခံလို့မရတဲ့ အမူအကငျြ့ က စိတျ ထား သေး သိမျ တာ ပါ။
Fan တှအေတှကျ . . .
အားပေးတဲ့ ပရိတျသတျတှအေတှကျ Facebook – May Thun Kha Mtk , Instagram – May Thun Kha တှမှော Follow လုပျလို့ရပါတယျ။ ပရိတျသတျတှအေတှကျ ပွောခငျြတာက အား ပေး တဲ့ ပ ရိ သတျ တဈ ယောကျ ခငျြး ကို ကြေး ဇူး တငျ ပါ တယျ။ အ ကောငျး ဆုံး ဖွဈ အောငျ ကွိုး စားနပေါတယျ။
Previous: G-spot အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Next: ချစ်သူ စိတ်ပျက်မသွားစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အချက်များ